Useqalile ukuzilolonga futhi uMasilela | News24
Useqalile ukuzilolonga futhi uMasilela
Johannesburg - IKaizer Chiefs ingase idlale esekhona uTsepo Masilela eqenjini layo elizodlala koweCAF Champions League neqembu laseBotswana iTownship Rollers.
Ithimba lodokotela kuChiefs libika ukuthi lo mdlali wasemuva uqalile namhlanje ukuzilolonga neqembu kulandela ukulimala akuthola ngesikhathi bedlala neSuperSport United ngeledlule.
Funda nalolu daba: Akungidikibalisi ukungabizwa kwiBafana.
Khonamanjalo, iqembu selikuqinisekisile ukuthi uKhune akalimalanga kakhulu kodwa uthole imihuzuko nje kuphela kanti futhi lo mdlali uzohamba neqembu ukuya eBotswana.
IChiefs izodlala umlenze wesibili neRollers eNational Stadium eGaborone ngo-15:00.
IChiefs yanqoba ngo-2-1 emlenzeni wokuqala eFNB Stadium, kubika iKickOff.com.